ओलि र दाहाललाई उपसभामुख तुम्बाहाङफेको प्रश्न: त्यो पत्रमा के छ ? «
ओलि र दाहाललाई उपसभामुख तुम्बाहाङफेको प्रश्न: त्यो पत्रमा के छ ?
प्रकाशित मिति : 13 January, 2020 5:30 pm
काठमाडौं : उपसभामुख डा. शिवमाया तुम्बाहाङफेले नेकपाको निर्णयलाई चुनौती दिँदै राजीनामा दिन अस्वीकार गरेकी छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतबार पार्टीका दुवै अध्यक्ष, महासचिवसहित नेताहरूकै उपस्थितिमा उनले पार्टी निर्णय नमान्ने चुनौती दिएकी हुन्।